“နှမ ရွှံ့ပိတ်နေလေတော့ ဝီရသူနဲ့ ၉၆၉ အပေါင်းအပါတို့ရေ” | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Malaysia Wants Myanmar To Address Violence Immediately
Requesting OIC and ISLAMIC LEADERS to pressure UN, UNSG, UNGA and UNSC to take action on U Thein Sein, Min Aung Hlaing, 969 TERRORISTS and Rakhine State government »
“နှမ ရွှံ့ပိတ်နေလေတော့ ဝီရသူနဲ့ ၉၆၉ အပေါင်းအပါတို့ရေ”
မြန်မာပြည်မှာ မွတ်စလင်ဟာ လူနည်းစုဖြစ်တဲ့အပြင် နိုင်ငံအနှံ့ ပြန့်ကျဲနေထိုင်နေကြတယ်။ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား မွတ်စလင်တွေရှိသကဲ့သို့ အများစုဟာ တောင်အာရှတိုက်ဒေသကြီးမှ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ အတွင်း အခြေချခဲ့သူတွေလဲရှိတယ်။ တရုတ်နွယ်ဖွားမွတ်စလင်တွေ အများအပြား ရှိသလို ဒီနေ့ခေတ်မှာ အများစုက ကပြားတွေ ဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ သို့သော် မြန်မာမွတ်စလင်တွေဟာလည်း တလောကလုံးက မွတ်စလင်တွေလိုပဲ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ဘူး။ ရန်ကုန်တစ်မြို့ထဲမှာတင် အဖွဲ့ပေါင်း၊ အုပ်စုပေါင်း မရေမတွက်နိုင်အောင် ကွဲနေကြတယ်။ နှစ်ယောက်တွေရင် တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့နေခဲ့ကြတယ်။ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက် မကြည့်ချင်အောင်လည်း အချင်းများခဲ့ကြတယ်။
ဖင်ပြဲအောင် အော်ကြစမ်း မျိုးစောင့်တရားတွေ။ လိပ်ခေါင်းထွက်အောင် အော်ကြစမ်း မွတ်စလင်မုန်းတီးရေးတွေ။ ငါတို့ အချင်းချင်း ညီညွတ်ဖို့ ငါတို့ နှစ် ၅၀ လောက် ကြိုးစားလာတာ အထမမြောက်ခဲ့တာတွေ၊ အရာမထင်ခဲ့တာတွေ မရှိတော့ဘူး။ ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်။ အခုငါတို့ အလိုအလျောက် စည်းလုံးညီညွတ်လာပြီ။ စုစည်းပေါင်းစပ် အားထုတ်စည်းရုံးလာပြီ။ မင်းတို့က ငါတို့ကို မုန်းလေလေ၊ ငါတို့က အချင်းချင်း ပိုချစ်လာလေလေပဲ။ မင်းတို့က မျိုးစောင့်တရားတွေဟော၊ မျိုးစောင့်ဥပဒေတွေထုတ်၊ ငါတို့က ငါတို့နှမတွေ၊ ငါတို့သမီးတွေအတွက် ပိုစိတ်ချရလေလေ။ ငါတို့ အချင်းချင်းရဲ့ တန်ဖိုးကို ပိုသိလာလေလေပဲ။
တစ်ခုပဲ ပြောလိုက်မယ်။ “နှမ ရွှံ့ပိတ်နေလေတော့ ဝီရသူနဲ့ ၉၆၉ အပေါင်းအပါတို့ရေ”။
This entry was posted on July 1, 2013 at 5:00 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.